Nin xaaskiisa dhaawac xun ugeystay kadib markii uu ku riyooday in ay gogol dhaaf sameysay! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Nin xaaskiisa dhaawac xun ugeystay kadib markii uu ku riyooday in ay...
Nin xaaskiisa dhaawac xun ugeystay kadib markii uu ku riyooday in ay gogol dhaaf sameysay!
Nin xaaskiisa dhaawac xun ugeystay kadib markii uu ku riyooday in ay gogol dhaaf sameysay
Egypt (Halqaran.com) – Nin ayaa isku dayay in uu dilo xaaskiisa kadib markuu ku riyooday in ay sameysay gogol dhaaf iyadoona dhaawac xun uu ka soo gaaray cunaha, waxayna dhacdadaan ka dhacday xaafadda Shubra El Kheima oo ka tirsan gobolka Qalyubia oo caasimadda Masar ee Qaahira dhanka waqooyi ka xigta.
Muuqaal dhawaan la faafiyay ayaa muujinaya in la qabtay ninkaan oo sida la sheegay qaba cudurka dhimirka.
Ninkan oo magaciisa lagu soo koobay Mohammad S. ayaa la geeyay xabsiga magaalada Shubra El Khaimah kadib markuu isku dayay inuu baxsado, ninkaan ayaa waxaa dharkiisa ka muuqday dhiig fara badan isagoona gacanta ku heystay nuqullo kamid ah Qur’aanka Kariimka.
Ila wareedyo ka tirsan laamaha amniga ayaa sheegay in eedeysanaha uu hadalo yaab leh ka sheegay intii uu socday baaritaanka, isagoona yiri “Markaan seexday ayaan ku riyooday in xaaskeyga ay i khiyaantay, sidaa darteed waxaan go’aansaday in aan ka takhaluso iyada.”
Nasiib wanaagse, xaasku waa nooshahay waxaana lagu dabiibayaa isbitaal iyadoo ku jirta qolka daryeelka deg dega ah.
kadib markuu ku riyooday ayadoo khiyaaneyso
Nin xaaskiisa dhaawac xun ugeystay